Xalka inuu ka soo kabsado Photos geli karin ka Canon PowerShot e
> Resource > Ladnaansho > An Easy Xalka inuu ka soo kabsado Photos ka Canon PowerShot
Xaaladaha ka soo Canon PowerShot badiyay sawiro
1. dhaco tirtiray oo dhan sawiro ka camera Canon PowerShot.
2. Waxay qaateen dhowr sawiro halka camera Canon PowerShot ahaa biligleynaya calaamad batari la'aan. Markaas ah 'Error Card Memory' farriin helay.
3. Marka aad nuqul sawiro ka Canon PowerShot in kombiyuutarka, waxaa jira qaar ka mid ah sawirrada ku guuldareysteen inay la soo guuriyeen. , Waxa kale oo aad aan iyaga ka heli kartaa kombiyuutar ama kamarada.
Weli waxaa jira xaalado ka badan aan la saadaalin karin oo ayan ku jirin kuwa kor ku metioned, sida kaadhka xusuusta in Canon PowerShot uu ku kharribeen ama sawiro noqon geli karin. Ma jirtaa xal kasta inuu ka soo kabsado kuwa photos geli karin ka camera Canon PowerShot?
Xal fudud inuu ka soo kabsado tirtiray / photos lumay ka Canon PowerShot
Marka noocan oo kale ah baadi dhibaato kaadhka xusuusta ku dhaca aad, ha ka welwelin. Qaado baxay kaadhka xusuusta ka Canon PowerShot iyo xerto kamaradaha kale digital ama telefoonada gacanta ama kombiyuutarka gaarka ah (fiican via akhristaha kaar). Markaas hubi in kaarka waa halka OK ama ma in qalab kale.
Weli ma shaqeeyaan? Markaas sida ugu wanaagsan si ay u hubiso sawiro (tirtiray ama geli karin) waa la soo saari karaa haddii waa in ay isku dayaan ah barnaamijka sawir Canon. Ilaa iyo inta kaarka SD ee aad Canon PowerShot ah waxaa lagu ogaan karaa your computer, fursadaha in undelete Canon waa mid aad u sarreeya. Laakiin ka hor inta aanan waxba qaban, waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo barnaamij soo kabashada xogta on your computer ka dibna ku xidhi aad kaadhka xusuusta Canon PowerShot waa in.
Haddii aad isticmaalayso Windows OS, isku day Wondershare Photo Recovery - barnaamijka dhaqancelin ah in kaban karto sawiro, videos iyo music lumay adag drive computer, kaadhka xusuusta camera digital iyo flash drive iwm sokow, waxa ay sidoo kale soo kaban karto, sawiro ka soo Canon lagu lumiyo in laga soo wareejiyay Canon camera in computer.
Haddii aad isticmaalayso Mac OS X, ka dibna u leexdo xagga Wondershare Photo Recovery for Mac , oo ka shaqeeya isku mid.
Talooyin: Ha isku dayin in ay sawiro cusub ka hor intaadan soo kabsado photos lumay ka kaadhka xusuusta aad, oo wuxuu ku shubay kaadhka xusuusta meelo ammaan haddii ay dhacdo xaalad dhaawac kasta oo dhici doona.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay in aad qaadato 3 tallaabo dhammayn ka soo kabashada Canon PowerShot
1. Isku card ama camera in kombiyuutarka, iyo waxa laga baarayo ka dib markii ay barnaamijka.
2. Kulanka Xiisaha iyo hubi ee photos recoverable in la marsiiyey baxay.
3. Dooro photos iyo guji inuu ka soo kabsado iyaga.
Iska row: marka lagu badbaadinayo soo kabsaday photos, ma iyaga mar kale ku badbaadin powershot asalka xeerkoodu. Dooro ah kaydinta kale warbaahinta ama si toos ah iyaga ku badbaadin on your computer.
Video tutorial soo kabashada sawir Canon Powershot